Ifayela le-xxx.docx Alikwazi Ukuvulwa Ngoba Kunezinkinga Ngokuqukethwe
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Word Repair Ifayela le-xxxx.docx Alikwazi Ukuvulwa Ngoba Kunezinkinga Ngokuqukethwe
Imininingwane eningiliziwe mayelana "Ifayela le-xxxx.docx Alikwazi Ukuvulwa Ngoba Kunezinkinga Ngokuqukethwe" Iphutha
Lapho uvula idokhumende ye-Word elonakele nge-Microsoft Word 2007 noma izinhlobo eziphakeme, ubona lo mlayezo wephutha olandelayo:
Ifayela le-xxx.docx alikwazi ukuvulwa ngoba kunezinkinga ngokuqukethwe.
(Imininingwane: Ifayela lonakele futhi alikwazi ukuvulwa.)
lapho 'i-xxx.docx' yifayela ledokodo elikhohlakele.
Chofoza inkinobho ethi "Kulungile", uzobona umlayezo wephutha wesibili:
IZwi lithole okuqukethwe okungafundeki ku-xxx.docx. Ngabe ufuna ukubuyisa okuqukethwe yile dokhumenti? Uma uthemba umthombo wale dokhumenti, chofoza u-Yebo.
Chofoza inkinobho ethi “Yebo” ukuze iZwi libuyise idokhumenti.
Uma iZwi lehluleka ukulungisa idokodo elonakele, uzobona umlayezo wephutha wesithathu. Isizathu esinemininingwane sizohluka ngokuya ngezimo ezahlukahlukene zenkohlakalo, isibonelo:
(Imininingwane: I-Microsoft Office ayikwazi ukuvula leli fayela ngoba ezinye izingxenye zilahlekile noma azivumelekile.)
Ngezansi kukhona izithombe-skrini zesampula zemiyalezo yamaphutha:
Chofoza inkinobho "KULUNGILE" ukuvala ibhokisi lomyalezo.
Lapho ezinye izingxenye zombhalo weZwi zikhohlakele, uzothola imilayezo yamaphutha eshiwo ngenhla. Futhi uma inkohlakalo inzima futhi iZwi lingenakukuthola, ungasebenzisa umkhiqizo wethu DataNumen Word Repair ukulungisa umbhalo we-Word nokuxazulula leli phutha.
Kwesinye isikhathi iZwi lizokwazi ukubuyisa okuqukethwe ngumbhalo kusuka kudokhumenti eyonakele, kepha ezinye izithombe azikwazi ukutholwa. Esimweni esinjalo, ungasebenzisa futhi i- DataNumen Word Repair ukuthola izithombe.
Isampula lefayela ledokodo le-Word elonakele Ifayela elitholwe ngu- DataNumen Word Repair